Kedu ka esi eto tomato na cucumbers na mbara ihu ma ọ bụ windowsill nke ụlọ obibi: esi esi akụ ma lekọta akwụkwọ nri ndị a n'ụlọ? - Akwukwo nri - 2020
Otu nduzi bara uru banyere otu esi eto ezigbo tomato na cucumbers n'ime ulo na mbara ihu
Enwere echiche na enweghi ike ịnabata cucumbers na tomato, mana ma ọ bụrụ na ezughị ezu maka idebe akwụkwọ nri ndị a n'ime ọnọdụ ụlọ, ma ịchọrọ ịgha mkpụrụ nke ihe ubi ahụ? Iji mee nke a, ịkwesịrị ịghọta nkọwa nke ịkụkọ ihe.
N'isiokwu a, ị ga-amụta ụzọ ị ga-esi akụ cucumbers na tomato, nakwa otu esi elekọta ha, ihe ndị ọrịa na pests nwere ike imetụta ha na otu esi edo ha.
Ebe na ọnọdụ
Ụdị pụrụ iche
Olee otú akụ seedlings?
Ntughari, pinching, pinching
Achịcha odo nke tomato
Okpokoro Kukumba White
Ọ ga-ekwe omume na ị na-etolite akwụkwọ nri ndị a n'ụlọ?
Iji nwee ihe ịga nke ọma na-emepụta cucumbers na tomato, ọ bụ ezie na ọ siri ike, mana o kwere omume, ọ bụ naanị ihe dị mkpa iji mepụta ọnọdụ nke ọ bụla na-agaghị emetụta ihe ọkụkụ ọ bụla.
Ọnọdụ na-eto eto maka cucumbers na tomato dị iche iche. Ma ọ bụrụ na ọ bụrụ na ndị na-arụ ọrụ nkwonkwo na-enye mmasị na tomato, cucumbers ga-ata ahụhụ ntakịrị site n'ikpo ọkụ nke ikuku, mana ha ga-adị ndụ na ya. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ịmepụta ọnọdụ ndị dị mma maka cucumbers - tomato agaghịzi amị mkpụrụ ma malite imerụ oke.
Ọ bụrụ na ọnọdụ nke ụlọ nwere ohere iji nọgide na-enwe ụfọdụ ihe ngosi, mgbe ahụ, ọ bara ezigbo uru ịmepụta ihe ubi - na windo ma ọ bụ ime ụlọ.
Kukumba mkpụrụ na okpomọkụ nke 25-28 degrees, tomato na 22-25. Ọ bara uru ịkwụsị na okpomọkụ nke +25, nke ga-adaba ma akwụkwọ nri abụọ ahụ.
Tomato na-ada ọrịa na iru mmiri karịa 70%, ma ọ bụrụ na ịdebe ya n'okpuru uru a, cucumbers ga-adịtụ ala, ma n'ozuzu ha na-enwe ike iguzogide ya. Ugbo abuo a jiri obi oma choputa ikuku.
Ebe kachasị mma maka ihe ọkụkụ na windo na-eche ihu n'ebe ọwụwa anyanwụ ma ọ bụ n'ebe ọdịda anyanwụ.
N'etiti n'agbata tomato na cucumbers na mbara ihu ma ọ bụ windowsill, ịnwere ike ịwụnye nkebi na ihe nkiri uzo.
Ụdị tomato maka nkwonkwo akuku na cucumbers ga-eguzogide ọgwụỌ bụkwa ihe amamihe dị na ya ịhọrọ maka ụdị dị ala na-eto eto ma nyekwuo anya ka e guzobe ya. Site na ndepụta nke cucumbers, ọ bara uru ịhọrọ ụdị ndụ ndị na-adịghị mkpa karịsịa ka ogbugba mmiri n'ubi na iru mmiri, na mma-tolerated drafts.
Ọ ka mma ịmalite mkpirikpi dị iche iche nke na-agaghị egbochi osisi ndị gbara ya gburugburu.
Mgbe ị na-ahọrọ ihe maka ite dị mma iji nọrọ na plastic - ọ dị ọkụ na ume. Maka tomato na-eto eto n'ụlọ, ma na windo na n'elu mbara ihu ahụ, ihe dịka liter atọ kwesịrị ekwesị: maka cucumbers, ite ahụ kwesịrị ịdịkarịa lita ise.
Ịnwere ike ịzụta ihe dị iche iche a kwadebere "Tomato, Pepper", "Kukumba" ma ọ bụ kwadebe onwe gị n'ala, jikọta ala ubi, peat na humus na oke nha. I nwekwara ike jikọta otu akụkụ nke peat na ájá na akụkụ abụọ nke mbara ala, ma ọ bụ otu akụkụ nke ala ubi na humus sitere na compost na mgbakwunye nke iko ash na tablespoon nke azofoska.
Ihe ngwakọta nke a ga-agbatị ihe ngwọta nke potassium permanganate maka disinfection. Na ala nke ite ahụ dị mkpa iji hazie drainage. Maka nzube ndị a, pebbles kwesịrị ekwesị, ụrọ gbasaa ma ọ bụ brik batara.
Otu esi akụ nkpuru na windo ma obu mbara ihu:
A na-akụ mkpụrụ osisi na iko iko dị iche iche.
Mgbe ha tolitere, gaa na nnukwu mmiri na ebe.
Maka ezi mkpụrụ osisi ị ga-achọ ịnọgide na-enwe oke iru mmiri ma na-emekarị ịgbara.
N'oge a, mkpụrụ osisi tomato, nke na-adịghị achọ iru mmiri dị elu, na-akụ ya na akpa nke kpuchiri ya na ihe nkiri n'ihu germination.
Ya mere, ọnọdụ dị mkpa iji kwado ọdịbendị abụọ na ogbo nke mkpụrụ osisi germination adịghị atụghasị ma ghara ịlụ ọgụ.
A na-emepụta mkpụrụ osisi cucumbers site na usoro ntụgharị, ebe ọ bụ na a na-akụ ha n'otu n'otu n'ime obere akpa na-adịru nwa oge.
Mgbe ị na-ewere tomato, a na-ewepu osisi n'otu n'otu site na ala, a na-egbutu mkpịsị mgbọrọgwụ ma na-atụgharị ya n'otu nnukwu ite.
Site na oge ịkụ mkpụrụ seedlings ka ọ bụrụ ebe na-adịgide adịgide, ọ dị mkpa iji nọgide na-enwe ọnọdụ dị mma maka omenala abụọ ahụ. Ihe kachasị mkpa n'okwu a bụ inye tomato. Kukumba kwesịrị inwe ntakịrị mmiri ma jiri ya mee ihe mgbe niile.
Ala n'ime tankị ekwesịghị ịdị ọkụ, na gburugburu ebe ahụ mgbọrọgwụ malitere ịkụ na osisi ahụ anwụọ.
E kwesịrị ime ntanye dịka atụmatụ ahụ dị kwa ụbọchị atọ ọ bụla. Mgbe atọ, ọ dị mkpa ịtọghe ala. Ọ bụrụ na ihu igwe na-ezo, ọ dị gị mkpa ịhapụ oge ahụ ma mee ka osisi ahụ ghara ịdị na-adịkarị ala, na-elekwasị anya n'ókè nke ihicha ala.
Akpa mgbakwasa maka tomato nwere ike mee 40-50 ụbọchị mgbe akuku.
Fatịlaịza kachasị mma - humus, nke a pụrụ ịzụta na mbipụta ahụ a kwụsịrị na ụlọ ahịa ahụ. A na-agbakwunye ya n'ala na elu nke abụọ centimeters, ekele nke mgbọrọgwụ jupụtara na oxygen ma nweta ihe niile dị mkpa maka mmepe.
Ịgbara cucumbers kwesịrị ịdị nwayọọ, ka ọ ghara ịmepụta oke mmiri, iru ala maka tomato.
Osisi n'onwe ya ga-agwa gị mgbe ịchọrọ ime mgbakwasa: epupụta ga-amalite ịgwụ, mkpụrụ ga-enweta ọdịdị nko, obere obere ovaries ga-anwụ.
Maka cucumbers, ọ bụ ihe na-achọsi ike itinye nri site na nsị, ma mgbe ị na-ekere òkè ụlọ na tomato, a ghaghị izere usoro a ma na-etinye nri na ala.
Maka ihe eji ejiji, ị nwere ike iji Ross fatịlaịza zuru ụwa ọnụ.
A na-ewepụ akụkụ nile nke Ome na kukumba, ha na-eme ka osisi ahụ daa mbàmgbe iri na abụọ na-egosi na ọ dị mkpa iji pinye n'elu, nke a ga-enye aka na ngwangwa ngwa ngwa nke mkpụrụ osisi ama ama.
A na-ewepụ epupụta ala kpọrọ nkụ site na tomato, a na-ewepụ ihe ndị na-eto na sinuses (pinching), ma tuo n'elu.
Na ebe a na-ejikọta ya na-echekwa na mmepe osisi anaghị egbochi ibe ha ma ha ejighi obi ike mechie alaka.
Mgbe nanị afụ ọnụ na-egosi na cucumbers, ịkwesiri ịkwado mkpọ n'ime ala ma kechie ya. N'iburu eziokwu ahụ anya na maka ịkụ n'ime ụlọ, ọ ka mma ịhọrọ ụdị tomato dị iche iche, nke na-adịghị mkpa, ha agaghị achọ garters.
Ị nwere ike ịhọrọ usoro ịkwado maka tomato, tinye ha n'ime karama plastik n'ụzọ ụfọdụ ma kpọgide ha n'elu ihe ọ bụla.
Ọ na-eri na sap nke epupụta. N'ebe a na-ata ata, obere oghere na-egbuke egbuke na-apụta, bụ nke na-ejikọta oge ma merụọ ọnwụ akwụkwọ ahụ. Usoro nchịkwa: nchọpụta oge nke ebe obibi ozuzu ụmụ ahụhụ na ọgwụgwọ na ụmụ ahụhụ.
Nwere ike ịbanye site na ihe niile akuku ihe onwunwe, emebi emebi mgbọrọgwụ. Ụzọ nchịkwa - dochie ala rụrụ arụ. Maka igbochi - disinfection na ala mgbakwasa.
Ọ na-eri na ihe ọṅụṅụ nke epupụta ahụ, osisi ahụ emetụtara na-ekpuchi ya na ero nro. Usoro mgba bụ mwepụ nke ụmụ ahụhụ na ịkụnye osisi ahụ na ụmụ ahụhụ.
Ọrịa ọrịa. Ọ na-apụta n'oge okooko na mkpụrụ osisi na-acha akwụkwọ ndụ-acha odo odo, nke mbụ site na ala epupụta, wee na n'elu epupụta. A na-eji ọgwụ ọjọọ eme ihe iji lụọ ọgụ.
Ọrịa ọrịa na-emetụta ọbọ kukumba na mpaghara basal. Ngwa na-ehicha, dicha ma kpuchie ya. A na - ebuso ọrịa ahụ agha site n'enyemaka nke ọgwụ ọjọọ.
Ọnụ na-eto kukumba na tomato n'ụlọ nwere ikeNke a bụ ọrụ siri ike, mana ọ na-akwụ ụgwọ n'onwe ya. Enwe ihe ubi n'ubi enyi nke ihe ubi di iche iche puru ime ya na irube isi na atumatu a maka nlekọta na ime ihe kwesiri ime ka igbochi oria.